Nyocha nke iko Snapchat, iko iji dee ihe niile | Akụkọ akụrụngwa
Ikuku Snapchat: iko di egwu ị gaghị eji ọtụtụ
Pablo Ortega | | Ngwa, Ngwa, General, Nyocha
You na-echeta na oge ọla edo na ụwa nke teknụzụ mgbe anyị kwenyere na smart iko ga-eme n'ọdịnihu? Google bu ulo oru mbu jiri Google Glass ya nyocha ahia a. O mere ya ọtụtụ afọ na ihe ngosi dị oke ọnụ (na euro 1400 ọ bụla) ma sie ike inweta. Ugbu a, ọrụ ahụ yiri ka ọ nwụọla, agbanyeghị na Google kwuru ọnwa ole na ole gara aga "na ihe ahụ akwụsịghị ebe a", anyị anụbeghị ihe ọ bụla gbasara ya.
Snapchat agbaala mbọ na-enweghị ihe ịga nke ọma na Google Glass ma nwee obi ike ịzụlite iko ọhụụ nke na-akwadebe teknụzụ nke m, opekata mpe, ahapụla m ikwu okwu. Wouldgaghị atụ anya na otu netwọkụ mmekọrịta ga-arụ ọrụ ụlọ ya nke ọma na ngalaba ngwaike maka ọrịre ọhaneze na Ihe ngosi dị ịtụnanya, mana ejiri ha eme ihe.
1 Omume ụlọ mere nke ọma: Ọgbara ọhụrụ, ọ bara uru
2 Pịa ma Dekọọ
3 Dị ezigbo mma
4 Ilegeli anya hà bara uru ịzụrụ?
Omume ụlọ mere nke ọma: Ọgbara ọhụrụ, ọ bara uru
Isi ihe dị iche n’etiti ugogbe anya na Google Glass bụ imewe ha. Googlegba chaa chaa nke Google bụ ihe ịchọ mma dị mfe na ihu anyị nke na-etinye obere ihuenyo na otu anya. Onye ọrụ ahụ mere nnukwu mgbalị iji tinye uche ya na ihuenyo ahụ. Otú ọ dị, Igogbe anya na-enye ọkaibe mara mma na onye nwere ugogbe anya maka anwụ ga-enwe ekele (ee, Igwe onyogho nwere ike ịba okpukpu abụọ dika ugogbe anya). Agbanyeghị, ọ gaghị enwe isi dị ukwuu iyiri ha n’ime ụlọ, ebe ị ga-adị ntakịrị ihe ọchị ma ị yikwasị ha.
Styledị nke Nlele anya bu omenala, ma odi n’otu oge, dị ka a hụrụ na okirikiri abụọ a hụrụ na ihu nke iko. Anya m dị gburugburu, mana anyị nwere ike “nwee anụrị” site na ịhọrọ njedebe nke ga - eso mmadụ anyị, ma ọ bụ oji, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọbara ọbara. Onwe m, m na-ahọrọ ihe nlereanya ahụ na tii-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mana na nyocha a enwere m ohere igwu egwu na nwa ojii, nke dịkwa mma nke ukwuu.
Na mbụ ọ bụụrụ m ntakịrị ịmara ijide iko ahụ. Mgbe itinyere ha, ị ga-ahụ okirikiri abụọ dị n’elu wee yie ka ọ na-egbochi ikiri ikiri gị. Mana ọ metụtara eziokwu ahụ bụrụ oke ọkụ. Ga-eche na igwefoto ejikọtara na iko na ọkụ ọkụ ga-ebuwanye ibu, mana eziokwu ahụ bụ na iko iko ndị a anaghị erugharị dị egwu. N’ezie, ọ dị ha ka ejiri ihe “dị ọnụ ala” mee ha.
Ihuenyo na-abịa na nke ha agba aja aja-Snapchat Ma, kwere m, mgbe ị na-eyighị ha, ị ga-achọ idobe ha nke ọma na mkpuchi nke ha n'ihi na ọ na-eguzogide ọgwụ (mkpuchi na mberede). N'ime ikpe ahụ, iko ndị ahụ dabere na chaja arụmọrụ dị egwu. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụghị nsogbu ị ga-ebu karịa eriri, n'ihi na enwere ike ịchekwa chaja Spectacles n'ụzọ dabara adaba n'akụkụ iko.
Akụkụ ọzọ nke m ga-eme ka ọ pụta ìhè bụ mfe nke anyị nwere ike ijikọ iko smart na ekwentị anyị site na Bluetooth. Iji mee nke a, ozugbo anyị nwere iko dị n'aka anyị ma jikọọ ya, anyị na-aga ngwa Snapchat na ekwentị ahụ, anyị na-aga na ntọala ma ozugbo anyị ruru anyị pịa nhọrọ «Nlegharị anya«. N'akụkụ a ị nwere ike itinye ngwa ejiji ọhụrụ gị, lelee ma ọ bụrụ na ha ejikọrọ, ọkwa batrị fọdụrụnụ ma lelee ma enwere mmelite ngwanrọ dị.
Pịa ma Dekọọ
Emere iko Snapchat iji mee ka akụkọ ndị ọzọ dị na netwọkụ mmekọrịta. Mgbe ngosi nke Akụkọ Instagram, ụlọ ọrụ ahụ zaghachiri ngwa ngwa na ngwa nke dị mfe ịbanye na ndụ anyị kwa ụbọchị yana nke ahụ, na-agba ume, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, iji netwọk mmekọrịta.
N'okwu m, abụ m otu n'ime ndị ọrụ ahụ kwuru "Sayonara!" ka Snapchat Mgbe akụkọ Instagram na Ihe ngosi pụtara, ha mere m ka m jiri netwọkụ mmekọrịta ọzọ. N'ihi gịnị? N'ihi na Ọ dịịrị m mfe ijide oge ọ bụla nke ndụ m kwa ụbọchị Naanị pịa bọtịnụ na iko ma dekọọ maka sekọnd ole na ole. Ugboro ole ka ọ mere gị na enyi gị mere ihe na-atọ ọchị ma ị gwa ya ka o meghachi ya otu ugboro iji dekọọ ya na netwọk mmekọrịta? Ugbu a ị nwere ike ijide ụdị ụdị ndị a na nke mbụ. Iji foto ndị ahụ na-ese onwe gị bụ ihe bara uru, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ banyere ya, mana vidiyo ahụ agaghị adị mma ma ọ bụrụ na ị na-edekọ mgbe ị na-enyefe enyi gị iko ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ekele maka nzuzo gị ma ọ nweghị mmasị na echiche nke ịmara na mmadụ na-ese gị na ugogbe anya ha, echegbula onwe gị, n'ihi na otu n'ime okirikiri ihu nke Ihe ngosi gosipụtara ụfọdụ Ikanam ọkụ iji mee ka ndị mmadụ mara kedu ihe ị na-edekọ. Nke a bụ kpọmkwem otu n'ime esemokwu na nkatọ nke Google Glass, ebe ọ bụ na ị maghị ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịdekọ ma ọ bụ were foto gị na-enweghị ikike. N'agbanyeghị nke a, enwere m ike ịhụ n'onwe m na ọha mmadụ anaghị adị njikere ịnagide "techies" nke nwere ike ịdekọ ha.
Ihe ị ga-enwe mmasị na ya bụ eziokwu dekọọ vidiyo na aka. Ihe m na-efunahụ m na iko ndị a bụ ikike nke ịse foto, nhọrọ nke na-agaghị ekwe omume n'oge a. Ikiri na-enyere anyị aka were naanị 10, 20 na 30 obere vidiyo (na nhọrọ ịdekọ ọtụtụ n'usoro).
Ozugbo ike gwụrụ gị ị yikwasị iko gị ma ọ bụ dịrị njikere ile ihe ederede ahụ, ị ​​ga-ebufe ihe ahụ na ngwa ahụ. Ozi ọma ahụ bụ na ọ dịghị mkpa ka anyị buru ekwentị na ebe niile, n'ihi na iko nwere ike ịdekọ kpamkpam n'adabereghị.
Nzọụkwụ a nwere ike ịkpagbu gị, dịka m. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị umengwụ iji wepụ foto na vidiyo site na kaadi microSD, mgbe ahụ ọ ga-enye gị otu umengwụ iji wepụ obere vidiyo site na iko.
Na ngwa Snapchat ị ga-ahụ na ụzọ mkpirisi na-egosi obere vidiyo ndị ejidere na enyo. Nwere ike ibudata ha na ngalaba a, mana ọkwa dị mkpa nye ndị na-eri ihe: nwee plọg ma ọ bụ obere batrị nwere ike iji aka, n'ihi na batrị nke ama gị ga-ata ahụhụ. A ga-ebudata akụkọ na usoro SD na ndabara, mana ị nwere nhọrọ iji budata ọkacha mmasị gị na HD. N'ezie, m ga-ekweta na a na-ebufe data na oke ọsọ.
Dị ka ọ dị na mbụ na Snapchat, onye ọrụ nwere ike itinye nzacha na nhazi ha na obere vidiyo ndị ejiri iko ahụ mee, mana chefuo maka ịgbakwunye ihe nkpuchi ma ọ bụ mmetụta dị na ihu gị (nke ka bụ ngwaọrụ kachasị amasị ndị na-eso ụzọ nke netwọkụ mmekọrịta).
Na ibu obula nke nlele anya anyi gha enweta ihe nachi 100. Zuru oke maka ọrụ ụbọchị dum. Mgbe otu ụbọchị nke ojiji siri ike, hapụ iko na ha kwekọrọ ekwekọ. Pịa na bọtịnụ dị n'akụkụ iji chọpụta ego ole ha hapụrụ.
Dị ezigbo mma
Agba m dara mgbe ebudatara vidiyo HD mbụ. Echeghị m na iko ndị dị otú ahụ dị mfe ma dị mfe zoo ụdị nkà na ụzụ dị elu. Àgwà dị nnọọ egwu. Audio esighi na azu, ma obu. Videos egwu egwu. Ọ bụ ihe ijuanya na obere igwefoto a na-ezobe ikike dị otú ahụ mee ka onyonyo ahụ kwụsie ike.
Na mgbakwunye, iko na-enye ohere igwu egwu na ikiri elele Mgbe anyị bipụtara vidiyo na Snapchat (ọ bụrụ na anyị agbanye ekwentị ma tinye ya na eserese ma ọ bụ ọnọdụ ihu igwe, elekwasị anya n'otu isiokwu ahụ dịka a ga-asị na anyị ka na-eyi Ihe ngosi, mana anyị na-agafe n'akụkụ ka ukwuu nke ebe ndị ahụ ejidere) .
Naanị ihu ala bụ na, ọ bụrụ na ịchọrọ danloduo vidio a ka o jiri ya n’elu ebe ọzọ, mgbe ahụ Snapchat ga-etinye ya na etiti ọcha nke na-emebi àgwà.
Ilegeli anya hà bara uru ịzụrụ?
O doro anya na Snapchat maara na ire iko ndị dị ka ndị a ga-abụ ozi siri ike, mana ndenye aha ahia na ha emewo na United States ịkwalite ha abụwo, na-egbuke egbuke.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ndị na-eso ụzọ Snapchat na teknụzụ nwere ike zụta ha na kiosks na-adịru nwa oge na-apụta na mba ahụ. You maghị ebe ọ ga-apụta, ma ọ bụ n'oge ole, ma ọ bụ ogologo oge ọ ga-ewe maka iko ahụ, mana oge ọ bụla ha pụtara n'otu ebe (ọ bụ Venice Beach na Los Angeles, na Las Vegas ma ọ bụ n'ime miri emi na Grand Osimiri), Eresịla enyo na sekọnd ole na ole.
N'echiche a, ngalaba azụmaahịa Snapchat mepụtara "ọkụ" nke ọ gbara ndị mmadụ ume ka ha nweta akụrụngwa nke teknụzụ dị ụkọ, ya mere, nyere mmetuta nke iche.
Otú ọ dị, ọnọdụ gbanwere n'izu gara aga mgbe iko ahụ pụtara na ire ere $ 130. N'oge a, ha dị naanị na United States na anyị amaghị etu mgbasa mba ga-adị, ebe Snapchat ekwupụtabeghị ihe ọ bụla banyere ya.
Ha kwesịrị ịzụ? N'ezie price bụ oké ọnụ, ma mmachi ojiji. Ọ bụ naanị maka ndị ọrụ ahụ enweghị ike ibi na-enweghị Snapchat. Ee, iko ndị ahụ na-ezobe ezigbo teknụzụ teknụzụ dị n'ime, mana mgbe ụbọchị ole na ole jiri kpụ ọkụ n'ọnụ, ị nwere ike ịmalite ichefu banyere ha ma ha bụrụ akụkụ nke nchịkọta ngwaọrụ echefuru echefu.
- Ha nwere ntụsara ahụ
- Ezigbo imewe na okpukpu abụọ dị ka ugogbe anya maka anwụ
- Elu vidiyo
- Nnwere onwe
- Tinye ọcha etiti na vidiyo mgbe anyị chọrọ mbupụ ha na netwọk ndị ọzọ
- Anaghị ese foto
- will gaghị eji ha ọtụtụ ihe n’ọdịnihu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ikuku Snapchat: iko di egwu ị gaghị eji ọtụtụ
Gmail gbatịrị njedebe nke mgbakwunye ka 50 MB
256GB na microSD dị mma, nke ahụ bụ ihe Lexar na-enye